ကဲ Skype နှင့် သံယောဇဉ် မကင်းသူများ အတွက် တင်ပေး လိုက်ပါပြီ .. ကျွန်တော်အခု တင်ပေးတဲ့ portable တွေကို စုပြီး Flash drive ထဲ ထည့်ထားပါ . အသုံးဝင် ပါတယ် . မြန်မာပြည်မှာ မသိသာပေမယ့် . တစ်ခြားနိုင်ငံ တွေမှာ ကိုတင်ချင်တဲ့ program တွေကို ဆိုင်တိုင်းမှာ တင်လို့မရပါဘူး . ဥပမာ မိမိသုံးမယ့်ဆိုင်မှာ skype မတင်ထားဘူး ဆိုရင် ကိုက Download လုပ်ရပါမယ် . အချိန်ကြာပါမယ် . ဒီကြားထဲ တင်ခွင့်ကိုပါ ထပ်ပိတ်ထားမယ်ဆို စိတ်ညစ်ရမယ် . အာရုံနောက်ရမယ် . ကိုယ့်ရိက္ခာနဲ့ကို ဆိုတော့ တစ်ခါတည်း ပြီးရော . ကျွန်တော်ကတော့ skype မသုံးပါဘူး . မသုံးပါဘူးဆိုတာက မသုံးတော့တာပါ . chatting တွေ ခေတ်စားတုန်း ကတော့ သုံးခဲ့ပါသေးတယ်
skype မှာ ဘော်ဒါတွေလိုက်ရှာ . ပျော်စရာတော့ အကောင်းသားဗျ . အခုတော့လဲ gmail တောင် နပ်မမှန်ချင်ဘူး . ဖိုရမ်နဲ့ ၀ဘ်ဆိုက်တွေဖက်ပဲ ရောက်ရောက်နေတာ . အရင်တုန်းက ပျော်ရွင်မှုနဲ့ အခုပျော်ရွှင်မှုက အခုဟာက ပိုပြီးအနှစ်သာရ ရှိတယ်ဗျ . ကိုယ့်ဆိုက်လေး ထဲက စီဘောက်စ်မှာ သူငယ်ချင်းတွေ ရေးခဲ့ရင်ကို ပျော်နေတာ . အားရှိတာပေါ့ .
Download ifile.it ၊ Download nyinaymin.net ၊ Download megaupload ၊ Download4shared ၊ Download mediafire
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 5:44 AM